अधिकार सम्पन्न हुँदै चिनियाँ महिला? - China Radio International
अधिकार सम्पन्न हुँदै चिनियाँ महिला?
(GMT+08:00) 2017-01-04 09:14:39
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भै गणतन्त्र आएपश्चात् क्रमिक रुपमा महिलाहरु नेतृत्व तहमा पुगेका छन्। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु चीन, अमेरिका जस्ता मुलुकले नपाएको राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता उच्च पदमा महिला सहभागिताले नेपाल कति अगाडि छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ। लामो समयदेखि महिलालाई नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउने आन्दोलन सफल भएबाट के नेपालका आम महिलाको जीवनमा सुधार आयो त?
नेपालजस्तै अति कम विकसित मुलुक बंगलादेशमा पनि लामो समयदेखि महिलाले शासन गरेको उदाहरण छ। तर त्यहाँ पनि आम महिलाका अधिकार टुङ्गिएको ठान्न सकिन्न। त्यस्तै अरु अरु देशमा पनि महिलाले सत्ता चलाएका छन्। तर महिलालाई उच्च राजनीतिक तहमा पुर्‍याउन नसकेको र महिला अधिकार कुण्ठित गरेको भनेर चीनको टिप्पणी गरिन्छ। के महिलाहरु शक्तिशाली राजनीतिक तहमा नपुग्दैमा चिनियाँ आम महिलाको जीवनस्तर कमजोर भएको हो त?
चीन जति जति आर्थिक रुपमा समृद्ध हुँदैछ, उति उति उदारीकरणले भरिँदै गएको छ। पितृ सत्तात्मक मुलुक चीनले हाल महिलाका क्षेत्रमा सुधारका अनेकन् आयामहरु कोर्दै गएको छ। पछिल्लो उदाहरणको रुपमा दश वर्षे रणनीतिलाई लिन सकिन्छ। महिला विकास राष्ट्रिय कार्यक्रम 2011-2020 जारी भएको पाँच वर्षमा चीनले महिला अधिकार र सरोकारका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। ती मध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थतन्त्र, राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण र कानुनी मापदण्डमा ठूलो सुधार देखिन्छ। दश वर्षे योजनाको आधा बाटो पूरा भएपछि यसै वर्ष चीनले मध्यमकालीन योजना सञ्चालन गरेको छ। परिणामले उल्लेख्य सफलताले के महिलालाई शक्तिसम्पन्न बनाउन खोजेको हो प्रष्ट हुन्छ।
लिउ याङ्ग,2012 को जुन 16मा पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री
महिला र स्वास्थ्य- सन् 2014 को अन्त्य सम्ममा चीनले3हजार 98 वटा मातृत्व तथा शिशु स्याहार अस्पताल स्थापना गरेको छ। 91 दशमलव 1 प्रतिशत महिलाले गुणस्तरीय र त्यो भन्दा पनि माथि राष्ट्रिय शारीरिक फिटनेस मापदण्डमा पहुँच पाएका छन्। सन् 2015 को अन्त्यसम्म 51 दशमलव 95 मिलियन ग्रामीण महिलाले निःशूल्क क्यान्सर परिक्षण सेवा पाए भने7दशमलव 47 मिलियन महिलाले निशूल्क ब्रेष्ट क्यान्सर परीक्षणको लाभ लिए।
महिला र शिक्षा - सन् 2015 मा पोष्ट ग्राजुएट छात्राको संख्या9लाख 50 हजारले वृद्धि भयो जुन 49 दशमलव7प्रतिशत हुन आउँछ। महिला अध्ययन र लैङ्गिक समानताका 440 र 100 वटा कलेज स्थापना गरिए।3दशमलव 46 मिलियन महिलाले नन डिग्री हाइअर एजुकेशन र 20 मिलियन महिलाले माध्यामिक शिक्षा हासिल गरे।
महिला र अर्थतन्त्र - महिला विकास कार्यक्रमले दश वर्षका लागि अपेक्षा गरेको 40 प्रतिशत रेटलाई तोड्दै लक्ष्यको आधा बाटोमै चिनियाँ महिलाको रोजगर प्रतिशत पूरा जनसंख्याको 42 दशमलव9प्रतिशत पुर्‍यायो। चीनले कसरी4हजार महिला हाते सिलाई बुनाइ कारखाना खोल्यो जसबाट 10 मिलियन महिला रोजगार भए। कलेज छात्रालाई अभ्यस्त गराउन चीनले 8 हजार उद्यमी अभ्यास केन्द्र खोल्यो। उद्योगले महिला कामदारका लागि श्रम संरक्षण विशेष प्रावधान बमोजिम 74 प्रतिशत महिलालाई श्रममा लगाउने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याए। नगरपालिका र स्वायत्त प्रदेश सहित 26 प्रान्तले दुर्गम ग्रामीण जमीन स्वामित्वको अधिकारलाई कार्यान्वयमा ल्याए।
महिला र राजनीतिक सहभागिता- पछिल्ला पाँच वर्षमा गाउँ कमिटीमा महिला सहभागिता 1 दशमलव5प्रतिशतले बढेको छ। सन् 2010 अघिसम्म 21 दशमलव4प्रतिशत थियो। केन्द्रिय तथा प्रत्यक्ष अनुबन्धित सरकारी निकायमा निजामति सेवाका रुपमा सहभागि महिलाको संख्या 51 दशमलव9प्रतिशत पुगेको छ। औद्योगिक संस्थापनका व्यवस्थापकको रुपमा सहभागि महिलाको संख्या 38 दशमलव4प्रतिशत रहेको छ। 699 महिलाले 12औं राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसमा उपाध्यक्षको भूमिका निभाएका छन् भने 399 महिलाले 12औं चिनियाँ जनराजनीतिक परमर्शदात्री सम्मेलन राष्ट्रिय समितिमा सदस्यको जिम्मेवारी पाएका छन्।
महिला र सामाजिक सुरक्षा- सहरी महिला रोजगार वा सहरी भेगमा बस्ने 300 मिलियन भन्दा बढी आधारभूत स्वास्थ्य बीमा परियोजनामा सामेल भएका छन्। 60 वर्ष मुनिका महिलाको बीमा प्रतिशत 49 छ भने 60 माथिका महिलाको बीमा 50 प्रतिशत भन्दा अधिक छ। सहरी क्षेत्रका महिलाका लागि घरमै उपलब्ध चिकित्सा सेवाले सबै सहरी समुदायलाई ढाकेको छ भने दुर्गम क्षेत्रमा 50 प्रतिशत ढाकिसकेको छ। मातृत्व बीमा 77 दशमलव 12 मिलियनको छ भने पाँच वर्षमै बेरोजगारी भत्ताले 72 दशमलव 937 मिलियन महिलालाई समेटेको छ।
महिला र वातावरण - लैङ्गिक विभेद न्यूनीकरण गर्दै सामाञ्जस्यमूलक समाज निर्माणका लागि साँस्कृतिक तथा मिडिया नीति लागू गरिएको छ।7लाख भन्दा बढी सहरी तथा ग्रामीण समुदायलाई सँस्कृति-निर्माण गतिविधि जस्तै5राम्रा सभ्य परिवार, सुन्दर परिवारको अपेक्षा, राम्रो परिवारका मूल्य, राम्रो परिवार निर्देशित परियोजना संचालन गरिएको छ। पर क्यापिटा सहरी पार्कको हरियाली क्षेत्र 13 दशमलव4बर्ग मीटर छ।
82 दशमलव4प्रतिशत केन्द्रिय पानी वितरणका हिसावले सहरी क्षेत्रलाई समेटेको छ।
महिला र कानुन - सन् 2015 को डिसेम्बर 27 देखि चीनमा पहिलो महिला हिंसा विरुद्धको कानुन लागू भयो। पाँच वर्षमा चीनले लागू गर्‍यो भने महिला अधिकार रक्षासँग सम्बन्धित कानुनलाई9पटक संशोधन गरेको छ। नगरपालिका र स्वायत्त प्रदेश सहित 24 प्रान्तमा लैङ्गिक समानता मूल्यांकन संयन्त्र स्थापना गरी नियम कानुनको परिपालना गराइरहेको छ। 2010 देखि 2015 को बीचमा राष्ट्रभरिबाट 15 हजार महिला र 11 हजार बालबालिका अपहरणसम्बन्धी मुद्धा मिलाएको छ। चीनले प्रान्तीय, नगरपालिका र काउन्टी तहमा3हजार 739 कानुनी सहायता केन्द्र खोलेको छ। महिला सँघ मातहतमा रहेर सन् 2014 मा3हजार 11 आश्रय घर खोलेर घरेलु हिंसाबाट प्रताडित 23 हजार महिला तथा बालबालिकालाई सहायता गरेको वुमन अफ चाइनाले जनाएको छ।
यी सात सूत्रमा टेकेर चीन अहिले महिला सशक्तिकरणलाई पनि एउटा उचाइमा पुर्‍याउने अभियानमा जुटेको छ। आधारभूत रुपमा महिला सशक्त भएपछि भविष्य यसै सबल हुने महत्वाकांक्षाबाट चिनियाँ दश वर्षे रणनीति प्रेरित देखिन्छ।
2015 को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता थु यौ यौ।
चिनियाँ राजनीतिमा महिला सहभागिता न्यून छ। अमेरिकामा पनि प्रथम महिला राष्ट्रपतिको रुपमा हिलारी क्लिन्टनलाई हेर्ने विश्वको चाहना थियो। चीनमा प्रथम महिला फङ्ग ली युआनको भूमिका बल्ल बल्ल राजनीतिक तहमा तैरिन थालेको छ। यसअघिका कुनै प्रथम महिला सार्वजनिक मामिलामा शायदै छाउँथे। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि विस्तारै महिला पकड देखिँदैछ। महिलालाई शक्तिसम्पन्न बनाउने हो भने तल्लो तहदेखि नै सशक्त बनाउनुपर्छ न कि केही पदमा एकाध महिलालाई थपना गरेर। माथि पुगेका केही महिलाहरु बराबर आम महिला हुनसक्दैन। किनकी ती महिलाहरु केवल महिलाका लागि मात्रै त्यो भर्‍याङ्गमा उक्लिएका हैनन्। त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा पुरुष प्रधान नीति निर्माताहरुले नै महिलालाई हर क्षेत्र प्रवेशको बाटो खुल्ला राख्नुपर्छ र महिलाका लागि आधारभूत संरचनाको सुदृढ जग बसाल्नुपर्छ।